★မြန်မာ့အလင်း★: အချင်းချင်းသတ်လို့ ခွေးလို ၀က်လိုသေကြပြန်ပြီ။ ကျေးဇူးပါပဲAllah ရယ်
အချင်းချင်းသတ်လို့ ခွေးလို ၀က်လိုသေကြပြန်ပြီ။ ကျေးဇူးပါပဲAllah ရယ်
မွတ်ဆလင်တွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညီအစ်ကိုတွေလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ မိန်းခလေး အချင်းချင်းဆိုရင် အစ်မ၊ ညီမဆိုပြီးခေါ်ကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက အချင်းချင်းဆိုရင် သိပ်ကို ချစ်ခင်ကြတယ်။ သိပ်ကို စည်းလုံးတယ်လို့ အများမြင်အောင် အပေါ်ယံမှာ ပြောဆိုဆက်ဆံကြတာပါ။ တကယ်တော့ သူတို့အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကျင့်ယုတ်နေကြပါတယ်။ သတ်ဖြတ်နေကြတာပါ။ မွတ်ဆလင်တွေကို အများဆုံးသတ်နေတာ.. ဂျူးမဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ကိုတွေကို အများဆုံးသတ်နေတာ.. မွတ်ဆလင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်နေတာလဲ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက အရာရာဟာ Allahရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိပါတယ်။ ကဲဗျာ.. ကုလားအချင်းချင်းသတ်လို့ ခွေးလို ၀က်လိုသေကြတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရင်း Allah တစ်ကောင်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်။
PESHAWAR, Pakistan Sixteen Shiite Muslims were killed and four wounded Saturday in an apparent sectarian ambush inaremote tribal town in Pakistan,aparamilitary spokesman and local officials said.
“Sixteen people from the Shiite community have been killed and four were injured in the attack,”asenior security official in Peshawar told AFP.
“Today’s incident wasaresult of sectarian violence,” he said.
Major Fazal-Ur-Rehman,aspokesman for the paramilitary Frontier Corps, also confirmed the attack.
Local administrative and intelligence officials said all the dead were Shiite Muslims, adding that the toll could rise.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:40 AM